Ampio Aho fa Be Loatra ny Devoarako | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Turkmène Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mitadiava toerana ianarana. Tsy tokony hisy zavatra hanelingelina anao eo amin’ilay izy. Mampiasà latabatra raha misy. Aza mandefa tele.
Azo oharina amin’ny soavaly ny fotoana. Mila hainao ny mifehy azy
Izay zava-dehibe aloha no ataovy. Ny fianarana no zava-dehibe ka ny devoara aloha atao voalohany.
Aza mangataka andro. Aoka ianao hanana fotoana atokana hanaovana devoara, ary aza ovaovana izany.
Alamino ny fotoananao. Fantaro izay devoara tokony hataonao voalohany, inona no manaraka, ary toy izany hatrany. Ataovy lisitra ilay izy. Soraty ao koa ny fotoana tianao hamitana ny devoara tsirairay. Asio marika izay vita.
Miatoa kely tsindraindray. Makà aina kely, raha tsy mahavita mifantoka intsony ianao. Tohizo haingana araka izay azo atao anefa ilay devoara.
Manàna fatokisan-tena. Tadidio fa ny mpianatra mazoto matetika no mahazo naoty tsara fa tsy ny mpianatra kinga saina. (Ohabolana 10:4) Afaka ny ho mpianatra mahay àry ianao. Miezaha mafy, dia hahazo vokatra tsara ianao!
Inona no Hataoko Rehefa Misy Zavatra Mahasorena any Am-pianarana?
Maro ny zavatra mahasorena any am-pianarana. Misy zavatra dimy mety hanampy anao ato.